Iigadi - IGUMBI 2 elinamanzi ashushu
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguLorraine
Ihotele yeParadisiac enecala lolwandle eMontecristi, enamagumbi amane kuphela, yindawo efanelekileyo yabantu abanandipha uxolo kunye nendalo, kunye nale ndawo yokudada, i-jacuzzi kunye negadi entle yaseTropiki.
Iparadesi encinci kunxweme olusenyakatho. Ihotele yethu igxile ekuboneleleni ngeyona ngqwalasela ingcono, igxile ekuzoleni noxolo, ukusondelelana, kunye nobumfihlo luphawu lwethu lobuqu. Ihotele yethu yihotele yakho ngexesha lokuhlala kwakho, zive ukhululekile kwigadi yethu yeentyatyambo, yonwabele ixesha elimnandi kwi-jacuzzi yethu, kwaye ungcamle amanzi ekhokhonathi ejikeleze idama. Ihotele iLos Jardines yiparadesi ezandleni zakho, "i-petit coin de paradis", ikhaya lakho eCosta Verde.
4.58 · Izimvo eziyi-50
Indawo efanelekileyo yokuphumla kwaye ujabulele ukuzola, kufuphi nesixeko kunye neendawo ezikhangayo ezahlukeneyo zesixeko.
Siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi olunqwenelwa lundwendwe. Singakunika ulwazi malunga nokhenketho kwii-mangrove, isiqithi sebhokhwe, ukuntywila kunye neminye imisebenzi enokwenziwa kwisixeko saseMontecristi nakwiindawo ezingqongileyo.